PineTime, Linux smartwatch pamutengo wekupusa | Linux Vakapindwa muropa
PineTime, Linux smartwatch pamutengo unosetsa
Kunyangwe mawadhi akangwara anga aripo kwenguva yakareba, ivo vachiri kunetseka kugutsa ruzhinji rwevashandisi. Ndine rimwe kwemakore matatu, asi ndinaro nekuti ndakatora mukana usina kundimanikidza kubhadhara zvese zvaikosha, uye hongu, zvakanaka kwazvo, asi ini ndinofunga tiri kutaura pamusoro pemidziyo iri kazhinji kuperekedza smartphone uye ine mutengo wakakwira. Hongu kune zvimwe zvakachipa, asi hapana senge PineTime urikugadzirira chii PINE64.
Imwe nguva yapfuura ivo vandirega ndiedze smartwatch "kubva kumaChinese." Chinhu chega chakandibatsira ndechekuziva kuti wachi yakangwara inoita kuti zvinhu zvese zvinyatsogadzikana, izvo uye kuti zvakakosha kuve neinodhura kana kuti tichava nemanzwiro ekupfeka toyi pachiuno chedu. Uye zvakare, mutengo wayo, mukusimudzira nguva dzose, uri kutenderera € 50. Iyo PineTime inotiyeuchidza zvishoma nezveiyo Dombo: wachi yakanaka yekuperekedza iyo pinephone pamutengo unosekesa we $ 25, hafu yezvakakosha kune vamwe "vechiChinese".
PineTime, iye akakodzera shamwari kune yako Linux foni
Asi dzikama: isu tiri kutaura nezve chirongwa. Imwe iyo, tichifunga kuti ivo vachakurumidza kutanga kutengesa iyo PinePhone, tinogona kufunga kuti ichaenderera kumberi ichiperekedza kambani yekambani yeLinux.
Uyu ndiye #PineNguva (pikicha chaiyo) - a #Linux smartphone shamwari uye padivi-chirongwa chedu. Iwe uri @real_FreeRTOS or @ArmMbed yekuvandudza ine kufarira kuma smartwatches? - tizivise. pic.twitter.com/j7ygDWNqbD
- PINE64 (@ thepine64) September 13, 2019
Iyi ndiyo PineTime (chaiyo pikicha) - yeLinux smartphone shamwari uye padivi chirongwa chedu. Iwe uri weFreeRTOS kana ArM Mbed mushambadzi anofarira smartwatch? - tizivise.
Izvo zvinozivikanwa panguva yePineTime, ine musoro wemufananidzo uri wechokwadi, ndeuyu:
Ichauya nechaji yekuchaja, zvinoreva kuti ichabhadharisa neyakaiswa.
Izvo zvinosanganisira 20mm Milanese tambo.
Ichagadzirwa ne zinc alloy uye plastiki.
Bhatiri rinozogara mazuva akati wandei.
Mutengo: $ 25.
Pasina rumwe ruzivo kupfuura rwekare, tinogona kufunga kuti PineTime ichave yakafanana nemawadhi akangwara anoshandisa Tizen, kuchengetedza madaro kunyanya maererano nehurdware. Zvichava a yakakosha smartwatch Iyo yatinoona nayo nguva, zviziviso zvefoni yedu, kuita chiitiko chemuviri, pamwe kuisa mamwe mashandisirwo, uye zvese izvi pamutengo we $ 25. Izvo hazvinzwike zvakashata zvachose, asi isu tichazofanira kumirira mwedzi kana kunyangwe makore akati wandei kuti tizive zvese ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » PineTime, Linux smartwatch pamutengo unosetsa
Jose alvarado akadaro
Huye, hunhu hunoita senge hwakanaka kuchikwata ichi, uye zvakanaka, ndinoda kuzviedza munzvimbo dzese kana ukandisiya pamberi
Pindura José alvarado
Chimwe chirongwa icho gare gare hatizomboziva chero chinhu zvakare haha
Pine64, kana iwe ukapedza ako mapurojekiti, tengesa akati wandei zvidimbu zvehurdware, masumbu, rimwe bhodhi makomputa, iyo pinephone (mune preorder yevanogadzira), iyo pinebook, pakati pevamwe ... Pasina kupokana tichaona iyo pinetime munguva pfupi.
Linux wachi haisi chinhu chitsva. Ivo varipo pamberi peApple Watch
Zvimwe zvikonzero zvekukurudzira Manjaro Linux 18.1